फुटबलमा भारतसँग भिड्दै नेपाल
काठमाडौँ– ओलम्पिकको एशियाली फुटबल छनोट खेलमा नेपाल अहिले भारतसँग खेलिरहेको छ । म्यानमाको याङगोनस्थित थुवुन्ना रङ्गशालामा नेपाल र भारतबीच खेल भइरहेको छ ।
फोहोर फ्याँक्नेको पहिचान सीसीटीभीबाट काठमाडौँ। अरूको आँखा छल्दै फोहोरको पोको बोकेर कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? कतै बाटोघाटो, चौबाटोको मोड र छिमेकीका घरढोकाअगाडि फोहोरको पोको बिसाउने मनशाय त छैन ? यसो हो भने महानगरीय प्रहरी ...
करोडौं भिसा दस्तुर हिनामिना
‘गुन्डा नाइके’ निमा भनिने राजेन्द्र लामा पक्राउ